စိတ်အားတက်ကြွစရာ အင်္ဂလိပ်သီချင်းများ - For her Myanmar
များသောအားဖြင့် သီချင်းနားထောင်ရင် သံစဉ်ကိုပဲ ဂရုစိုက်ဖြစ်တာများပါတယ်။ အကယ်၍ စာသားလေးတွေကိုသာ အာရုံစိုက်နားထောင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်….
ယောင်းတို့ရေ.. နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ တစ်လတော့ ကုန်သွားပြီ။ နှစ်သစ်မှာ ဘာတွေလုပ်ဖြစ်ကြလဲ။ အလုပ်တွေ၊ ကျောင်းတွေနဲ့ အဆင်ပြေကြရဲ့လား။ ပင်ပန်းတယ်မလား။ ဒီလိုပါပဲ.. ရုန်းကန်ရတာပေါ့။ ပင်ပန်းလာတဲ့အခါ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ အပန်းဖြေဖြစ်လဲ။ အပန်းဖြေနည်းတွေတော့ အများကြီး ရှိတယ်နော့်။ ရှော့ပင်းထွက်တာတို့၊ ရုပ်ရှင်သွားကြည့်တာတို့၊ ခရီးထွက်တာတို့၊ မုန့်တွေချည်းလှိမ့်စားတာတို့.. အများကြီးပါ။ အက်ဒ်မင်ကတော့ စိတ်ပင်ပန်းလာရင် သီချင်းနားထောင်လိုက်တာပဲ။ အမြန်ဆုံးနဲ့ အလွယ်ကူဆုံး ပိုက်ဆံထွက်စရာမလိုတဲ့ နည်းလမ်းပဲ။ ဒီနည်းက အပန်းဖြေရင်းနဲ့ စာလည်းလေ့လာပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ အက်ဒ်မင်ပြောရင် ယုံလိုက်ပါ။ စာလုပ်ချင်မှတော့ အပန်းဖြေမနေဘူးလို့ ပြောစရာဖြစ်ပေမဲ့….။ အင်္ဂလိပ်သီချင်းကောင်းကောင်းလေးတွေ နားထောင်မယ်ဆိုရင်ရော…!!? စာသားတွေလိုက်ဖတ်ရင်း နားလည်အောင်ကြိုးစားတာမျိုးပေါ့။ ဒါဆိုသီချင်းကိုလည်း ပိုနားလည်သွားတော့ ပိုလည်းခံစားလို့ရ၊ အင်္ဂလိပ်စာလည်းကျွမ်း။ တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ်။
ခန္ဓာကိုယ်ရယ်၊ ဦးနှောက်ရယ် ပင်ပန်းနေချိန်မှာ စိတ်ကလည်း အလိုလိုပင်ပန်းလာတတ်ပါတယ်။ အဲ့အချိန်ကျရင် စိတ်ဓာတ်ကျစရာတွေ၊ စိတ်ဖိစီးစရာတွေ ပိုတွေးမိရော။ ဆိုတော့ ဒီလိုအခြေအနေမှာ စိတ်အားတက်ကြွစေတဲ့၊ စိတ်ခွန်အားပေးတဲ့ သီချင်းလေးတွေ နားထောင်ဖို့လိုပြီနော်။ အက်ဒ်မင်ဝေမျှမယ့် အင်္ဂလိပ်သီချင်းလေးတွေဆိုရင် အဓိပ္ပါယ်လည်းရှိ၊ နားထောင်လို့လည်းကောင်းပဲ။ သီချင်းတစ်ပုဒ်စီတိုင်းက အနှစ်သာရ အပြည့်ဝဆုံးလို့ ပြောနိုင်မယ့် စာသားလေးတွေကိုလည်း ရှင်းပြပေးသွားပါ့မယ်။
ပထမဆုံးတစ်ပုဒ်ကတော့ Rachel Platten ရဲ့ ‘Fight Song’ ဆိုတဲ့သီချင်းပါ။ မြူးမြူးလေးနဲ့ လူကိုလန်းသွားစေတဲ့ သီချင်းသံနဲ့တင်ကို စိတ်တက်ကြွစရာ။ ဘာအကြောင်းလဲဆိုရင် လောကကြီးအတွက်တော့ သူဟာဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့၊ သေးငယ်တဲ့ဖြစ်တည်မှုတစ်ခုပေမဲ့ သူ့အသက်ရှင်မှုအတွက် သူလက်မလျော့ဘဲ တိုက်ယူမှာပါတဲ့။ အက်ဒ်မင်ကြိုက်တဲ့ စာသားလေးတွေကတော့
“Likeasmall boat On the ocean Sending big waves into motion Like howasingle word Can make our heart open I might only have one match But I can make an explosion..” အဓိပ္ပါယ်ကတော့ “ကျယ်ပြောတဲ့ သမုဒ္ဒရာကြီးထဲက သေးငယ်တဲ့လှေလေးတစ်စင်းလိုပါပဲ။ လောကဓံလှိုင်းတွေက ရှေ့ဆက်သွားဖို့ဖိအားပေးနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတလေမှာ စကားလေးတစ်ခွန်းတည်းနဲ့လည်း လူတစ်ယောက်ရဲ့ နှလုံးသားတံခါးကို ဖွင့်နိုင်သလိုပေါ့။ ကိုယ့်မှာလည်း မီးခြစ်ဆံတစ်ချောင်းပဲ ရှိပေမဲ့ ပေါက်ကွဲမှုကြီး တစ်ခုဖန်တီးနိုင်သေးတာပဲ။” တဲ့။ ဘယ်လောက်ပဲ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုတွေ ဘဝကြီးက ကိုယ့်ဆီသယ်လာပါစေ ရအောင်ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ခွန်အားရသွားတယ်။
နောက်တစ်ပုဒ်ကတော့ တော်တော်များများသိလိမ့်မယ်လို့ ယူဆရတဲ့ Katy Perry ရဲ့ ‘Firework’ ပါ။ ထွက်တာတော့ တော်တော်ကြာနေပြီ။ ဒါပေမဲ့ ခုချိန်ထိ အက်ဒ်မင့် ဖေးဘရိတ်။ အကြောင်းအရာကတော့ လူတိုင်းဟာ တန်ဖိုးရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ သင်ခန်းစာလေး ပေးချင်တာ။ အကြိုက်ဆုံးစာသားလေးတွေဆိုရင်…
“You don’t have to feel Likeawaste of space. You’re original, cannot be replaced. ……….. Afterahurricane, Comesarainbow. Maybe you’re reason why all the doors are closed. So you could open one that leads you to the perfect road.”
အဓိပ္ပါယ်လေးက “ကိုယ့်ကိုကိုယ် အသုံးမကျတဲ့လူ၊ ဆန်ကုန်မြေလေးလို့ မသတ်မှတ်လိုက်ပါနဲ့။ မင်းဟာ နှစ်ယောက်မရှိနိုင်တဲ့ အရင်းအမြစ်တစ်ခုပါ။ မုန်တိုင်းတစ်ခုရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ သက်တန့်က အမြဲတမ်းစောင့်ကြိုနေပါတယ်။ ဖွင့်သမျှတံခါးတွေ မပွင့်လာဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းအရင်းက မင်းကြောင့်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ (ဒါဟာအသုံးမကျလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့) အကောင်းဆုံးလမ်းတစ်ခုဆီကို ပို့ဆောင်ပေးနိုင်မယ့် တံခါးကို မတွေ့သေးရုံပါ။” တဲ့။ ဆိုတော့ စိတ်ညစ်ခံနေမယ့်အစား အကောင်းမြင်စိတ်လေးထားပြီးတော့ ကြိုးစားလိုက်ရင် ကြိုးစားမှုရဲ့ အသီးအပွင့်ကိုတော့ ခံစားရမှာပေါ့။ ဟုတ်တယ်မလား ယောင်းတို့ရေ။
Related article >>> ဘယ်တော့မှ မရိုးသွားမယ့် သီချင်းကောင်းကောင်း သီချင်းဟောင်းလေးတွေ….
နောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်ကတော့ The Script ရဲ့ ‘Hall of Fame’ ပါ။ ဒီသီချင်းကတော့ တော်တော်ခွန်အားရတာ။ တီလုံးကလည်း မြူးလိုက်တာမှ။ ဆိုတဲ့သူရဲ့ အသံကလည်း တကယ်ကိုတက်ကြွနေတာ။ သီချင်းနားထောင်ပြီး လေပေါ်ပဲ မြောက်သွားသလို။ ဘာအကြောင်းလဲဆိုရင်တော့ စိတ်အားသာထက်သန်ရင် ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့။ အဲ့တော့ တွန့်ဆုတ်မနေဘဲ ကိုယ့်အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ပါတဲ့။ ဒီထဲမှာ ကြိုက်မိတဲ့စာသားတွေပြပါဆိုရင် တစ်ပုဒ်လုံးပဲရော်။ အဲ့တော့ နည်းနည်းတော့ များမယ်နော်။
“You can moveamountain, You can break rocks, You can beamaster, Don’t wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. …………….. Do it for your people, do it for your pride. Never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there’s gonna beaday When you’re, Standing in the hall of fame, And the world’s gonna know your name. Cause you burn with the brightest flame, And the world’s gonna know your name. And you’ll be on the world of the hall of fame.”
အဓိပ္ပါယ်ကတော့ “မင်းက တောင်ကြီးကိုလည်း ရွေ့နိုင်ပါတယ်။ ကျောက်ဆောင်တွေကိုလည်း ဖြိုခွင်းနိုင်ပါတယ်။ သခင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်နိုင်သေးတာပဲ။ ဘာလို့ ကံကောင်းတာကို ထိုင်စောင့်နေမှာလဲ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရင်းနှီးမြှပ်နှံလိုက်စမ်းပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ မင်းဘယ်သူလဲဆိုတာ အဖြေပေါ်လာမှာ။ မင်းကိုအားကိုးနေတဲ့ လူတွေအတွက် ကြိုးစားလိုက်ပါ။ မင်းရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် အားထုတ်လိုက်ပါ။ မင်းရဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် ဂုဏ်ဆောင်လိုက်ပါ။ မင်းရဲ့ နာမည်တစ်လုံးအတွက် အပင်ပန်းခံလိုက်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကမ္ဘာကြီးကမင်းနာမည်ကို သိတဲ့တစ်နေ့ရောက်လာမှာ… မင်း ကျော်စောခြင်းခန်းဆောင်ထဲမှာ ဝင့်ဝင့်ကြွားကြွားရပ်နေချိန်ပေါ့။ ကမ္ဘာကြီးက မင်းနာမည်ကို အသိအမှတ်ပြုလိမ့်မယ်… အတောက်ပဆုံး မီးလျှံနဲ့ လောင်မြိုက်သူ ဆိုပြီးတော့ပေါ့။ ကျော်စောခြင်း ခန်းဆောင်မှာလည်း မင်းဟာမှတ်ကျောက်တင်ခံရလိမ့်မယ်။” တဲ့။ တွေဝေမှုတွေ၊ မပြတ်သားမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ ဒီသီချင်းကတော့ အားတစ်ခုပါပဲ။
ကဲ.. ခုဆို အက်ဒ်မင်အကြိုက်ဆုံး သီချင်းလေးတွေ ရွေးပေးပြီးပြီဆိုတော့ ယောင်းတို့ နားထောင်ဖြစ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားရစရာ အင်္ဂလိပ်သီချင်းလေးတွေရှိတယ်ဆိုလည်း အချင်းချင်းဝေမျှသွားပါဦးနော်။ နားထောင်ချင်လို့။
Myat Moe February 14, 2018